Kungani Abantu Bame Ukulandela Umkhiqizo Wakho? | Martech Zone
NgoMgqibelo, ngoMashi 21, 2015 NgoLwesihlanu, Mashi 20, 2015 Douglas Karr
Enye ye-infographics yethu esiyithandayo esiyiklanyile sayishicilela Kungani Abantu Bangakulandeli ku-Twitter. Abantu bathole ukuhleka kuyo futhi ngethemba lokuthi kubenze bacabanga kabusha isu labo lokushicilela imithombo yezokuxhumana okwamanje.
Ngizosho okuthile lapha okungathusa abanye abantu:
Angikhathali noma abantu bangangilandela noma bazikhiphe ohlwini lwe-imeyili yami.
Ngiyakuzwa ukukhala kwentukuthelo nokwethuka njengamanje… futhi anginandaba nalabo, futhi. Ngikhathele futhi ngikhathele ngabamakethe abajaha izinhlamvu zamehlo esikhundleni semiphumela. Iningi labalandeli, abalandeli nababhalisile alilusizo ebhizinisini lakho. Lokho akusho ukuthi akumele ubakhathalele labo balaleli, ngimane nje ngithembekile. Izinombolo zimane ziyindlela yokuqinisekisa yabathengi namabhizinisi ukuthi bangehlulele… akukho okunye.
Futhi ngenxa yokuthi othile ozikhiphe ohlwini akusho ukuthi umkhiqizo wakho wenze okuthile okungalungile. Kunezinkulungwane zezizathu zokuthi kungani umuntu engalandeli noma azikhiphe ohlwini lwesiteshi sakho senhlalo noma incwadi yakho yezindaba. Mhlawumbe bayishiyile inkampani, mhlawumbe bakhushulelwa esikhundleni, mhlawumbe izibopho zabo zomsebenzi zashintshwa, mhlawumbe babecabanga ukuthi umkhiqizo wakho ungokuthile okuhluke ngokuphelele.
Ukukhulisa akusona isenzo sokulindela wonke umlandeli noma obhalisile ukuthi athenge. Ukukhulisa futhi yisikhathi lapho amathemba angathola ukuqonda ngomkhiqizo wakho futhi anqume ukuthi ulungile yini noma cha. Ngakho… abanye bayahamba.
Ngabe lokho kusho ukuthi azikho izinto ozenzayo ukubaxosha? Vele akunjalo. Ngisanda kuphendula engisebenza naye kuleli sonto ngamtshela ukuthi wayinyathela kancane ithoni nokugaxeka kwama-imeyili akhe kimi. Bengifuna azi ukuthi ubephusha ngamandla futhi ehlehla, ngaphandle kwalokho angangilahlekisela. Futhi, angiyena iklayenti lakhe elifanele ngakho mhlawumbe akufanele angilalele!
Ucwaningo luthole ukuthi ama-21% awalandelwanga ngenxa yokuqukethwe okuba yisidina, ngenxa yokugcwala kokuthunyelwe ku-Facebook noma ukuphakelwa okuxineneyo. Okuncane kungaba ngaphezulu… Ngakho-ke cabanga imvamisa yakho ephezulu ngokuyiqhathanisa nakwabanye abasembonini yakho noma wenze isivivinyo lapho unciphisa khona imvamisa.
Ngikushilo kaningi, isizathu esenza abantu bakulalele yingoba ubanikeza inani. Qhubeka nokuhlinzeka ngenani futhi uzogcina abalandeli abafanele nababhalisile. Ngokuhamba kwesikhathi, uzokwakha ukwethembana futhi ukubandakanyeka kuzolandela maduzane. Kepha yeka ukuzikhahlela uma abantu abambalwa behamba… kuzolunga. Hambani niyofuna okungcono!
Fractl futhi Buzzstream ihlolisise abasebenzisi bezinkundla zokuxhumana abangama-900 ukuthola lezi zimpendulo nezizathu zokulahlekelwa ngabalandeli.
Tags: izethameli ezikhulayouhlu olukhulayo lwabhalisileizizathu zabantu zokungalandeliizizathu zabantu abazikhipha ohlwiniInani